လူတိုင်း အတွက် မရှိမဖြစ် ပရိုတင်းဓာတ်ကို ဘယ်လို အစားအစာတွေက ရနိုင်လဲ? – YANGON STYLE
လူတိုင်း အတွက် မရှိမဖြစ် ပရိုတင်းဓာတ်ကို ဘယ်လို အစားအစာတွေက ရနိုင်လဲ?
ပရိုတင်းဓာတ်(အသားဓာတ်)ဆိုတာ လူတွေရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၊ အရေပြား၊ ဆဲလ် တစ်ရှုးများ နှင့်ဟော်မုန်းများ တည်ဆောက်ရေးအတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့ ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျခြင်းနှင့် ဆီချိုရောဂါကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။ RID အရ နေ့စဉ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ၄၆ ဂရမ် နှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးအတွက် ၅၆ ဂရမ် အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်က ကြွက်သားထုနှင့် ခွန်အားကို တိုးပွားစေကာ အဆီကို ကျစေပါတယ်။
သို့သော် ပရိုတင်းဓာတ်ကို အလွန်အကျွံစားသုံးပါက ကျောက်ကပ် နှင့် အသည်းကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ် အလွန်အမင်းဆုံးရှုံခြင်းကို ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရိုးပွရောဂါကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်ကို ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစားသုံးတဲ့ အစားအစာတွေကနေ ရနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အသားအမျိုးမျိူးနှင့် ငါးအမျိုးမျိူး၊ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပဲအမျိုးမျိုး နှင့် အချိူ့သော ကောက်နှံများ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပရိုတင်း ဖြည့်စွက်စာများမှီဝဲတော့မယ်ဆိုရင် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်ဆိုတာလည်း အများစုသော ဗီတာမင်များလိုပင် ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်သလောက်က လွဲလို့ မသိုလှောင်ထားနိုင်တာကြောင့် ပိုမိုနေလည်းအကျိုးမရှိသလို ဘေးတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲအကျိုးပြုကောင်းမွန်စေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်ပစေ တန်ဆေး ၊ လွန်ဘေးဆိုတာလေးကို သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီလိုဆို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို အစားအစာမျိုးတွေကို စားသုံးရင် ပရိုတင်းဓာတ် ရရှိလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ကြက်ဥကနေ သန့်စင်သော ပရိုတင်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြက်ဥမှာ vitamins, minerals, healthy fats, မျက်လုံးအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ antioxidants နှင့် ဦနှောက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော အာဟာရများစွာပါဝင်ပါတယ်။
အုတ်ဂျုံကတော့ ပရိုတင်း ကြွယ်ဝတဲ့ အပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် အညီညွတ်ဆုံးသော ကောက်နှံဖြစ်ပါတယ်။ အုတ် မှာ fibers, magnesium, manganese, vitamin B1 ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
နိ့ထွက် ပစ္စည်းဖြစ်သော ဒိန်ချဉ်မှာလည်း ပရိုတင်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သန့်ရှင်း ပြီး အနှစ်များသော ဂရိဒိန်ချဉ်အမျိုးအစားမျိုုးတွင် ပိုမိုပြီး ပရိုတင်းဓာတ်များတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဘရိုကိုလိီ ကတော့ ပရိုတင်းများစွာပါဝင်တဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုတင်းအပြင် vitamin C, vitamin K, fiber နှင့် potassium တို့ပါဝင်ပါသေးတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်အတွက် စားသုံးပေးသင့်တဲ့ တခြားသော အစာအစာတွေကတော့
၁၂။ ဗံဒါစေ့ စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ Healthline website မှာဖော်ပြထားတဲ့ အထဲမှ မြန်မာပြည်နဲ့ ကိုက်ညီပြီး အလွယ်တကူရရှိနိုင် စားသုံးနိုင်သော ပရိုတင်းပြည့် အစားအသောက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အားအင်ပြည့်ဝ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။